10 Free Waxyaabaha Si Do In Paris | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Free Waxyaabaha Si Do In Paris
Waxaa jira wax badan oo Paris lagu yaqaan. Laakiin wax Free inuu ku sameeyo Paris ma aha wax la og yahay, waayo,. Waxay caan ku tahay in ay ka mid tahay meelaha ugu badan ka taataabtay ee dunida. caasimada fashion A iyo xataa Jannada suugaanta! Paris ayaa guises badan oo kala duwan. Oo intuu soo galo museum noqon kartaa uga yaacday ilaa iyo cuntada wanaagsan yimaado at premium a, caasimada Faransiiska ayaa sidoo kale noqon kartaa taariikhda raqiis ah. Ha noo rumeeyey? halkan waxaa ku qoran 10 Free Waxyaabaha Si Do In Paris!
1. Best Free Waxyaabaha Si Do In Paris: Musee Carnavalet
First on my liiska 10 wax Best Free inuu ku sameeyo Paris waa Musee Carnavalet. museum Tani ayaa la xiray muddo labo sano ah dayactirka, Si kastaba ha ahaatee, waxaa si rasmi ah dib on December, 20th 2019! Ku yaal xaafada taariikhiga ah ee Marais ah, Museum Carnavalet waxaa ka go'an in ay taariikhda Paris. From asal ahaan ay maalmahan.
booqdaha The awoodaan in ay ogaadaan ururinta qurxoon la xiriira jiri doonta magaalo. From Gallo Roman iyo waxyaabaha Dr Makumbe oo archives. Xusuusaha ka Revolution Faransiis ah in noocyada badan oo farshaxankiisa, farshaxan, alaabta guriga iyo farshaxanka alaabta ka muddooyinka kala duwan ee waqtiga!
Haddaad jeceshihiin magaalada Paris iyo jacaylka in aad iskaaga u kobciyo labada dhaqan ahaan iyo shakhsi ahaan, you will thoroughly enjoy the Musee Carnavalet! Waxaad la yaabi doonaa by uruuriyaa oo ay qaali ah, ay naqshadaha, iyo jawiga, in ay yihiin si caadiga ah ee Paris!
waxa kaliya waa i, ama mar walba oo qof sheegaye Notre Dame, Waxaan kaliya ka fekero Victor Hugo Hunchback la ilaawi karin of Notre Dame? Haddii aad u jecel movie ama ma, cathedral tani waa mid ka mid ah in ay booqasho. Ma aha oo kaliya waa cathedral Catholic Dr Makumbe badass, laakiin sidoo kale waa tusaalooyinka wanaagsan Faransiis Gothic naqshadaha baxay!
The daaqadaha galaas wasakheeyey (gaar ahaan Window Rose ah), isticmaalka faahfaahin naqshadda sida duulaya buttresses iyo farshaxan sameeyo waa arki waayo-aragnimo Paris free. Waayo, fursadaha sawir fiican ee ka Cathedral ka kori munaaradaha dawan ee view shimbiraha isha of Paris a. Wixii aragti ah Cathedral laftiisa, Square Jean XXIII bixisaa a nuqdad wanaagsan in ay qaataan aragti danbe ee taallo qurux badan. Best of dhan? Waa on our 10 Free Waxyaabaha la sameeyo in Paris. maxaad? Waxaad u qiyaasay. Waa bilaash!
Paris si ay Tareenadu Marseilles
Marseilles in Tareenadu Paris
Nice in Tareenadu Marseilles
Marseilles in Tareenadu Clermont Ferrand
3. Best Free Waxyaabaha Si Do In Paris: Pantheon The
Tani dhismaha quruxda badan waxaa markii hore la dhisay sida a meel lagu cibaadaysto. Si kastaba ha ahaatee, maalmahan waxaa la isku beddelaysaa Gorod a. Waxay hayaan hadhaagii dhowr PSG caan ah; Victor Hugo, Marie Curie, Alexandre Dumas magaca laakiin dhawr ah! The dushana halyeey Pantheons iyo Xamar waa la Shaad at sare ee Sainte Montagne ee kooramka, buuraha taariikhiga ah ee Quarter Latin.
Laga soo bilaabo Abriil ilaa October, dalxiisayaal ku raaxaysan kartaa views wanaagsan caasimada ka giraarka ee Xamar. naqshadaha The Neoclassical waa garabaka Pantheon ee Rome. Lagu aasay Pantheon waxaa loo arkaa mid ka mid ah sharaf ugu sareeya siiyey muwaadin. Looxii derbiga galo meeshii aaska on waxbay ushafeeci idanka axdiga si dareen this. Si rag waaweyn, hooyo mahadisaan.
Marka aad booqan kartaa bilaash ah? Moodayay in aad marnaba ku weydiin lahaa! Hel lacag la'aan lagu galo Sunday kasta ugu horeysa ee bisha ee ka 1 November in ay 31 March. Free kuwa ka yar 26 ka yimid dalalka ka tirsan Midowga Yurub, iyo sidoo kale macalimiinta hoose iyo sare. Free martida naafada ah iyo qof la socda, sidoo kale shaqo doonka ah iyo kuwa qaata gargaar gobolka French. Waxaa kale oo lacag la'aan ah ee dadka dhalinta yar iyo carruurta.
Paris si ay Tareenadu Rouen
Rouen in Tareenadu Paris
Paris si ay Tareenadu Calais
Rouen in Tareenadu Calais
Sidoo kale ku dhow inay hogaanka aan Free Waxyaabaha la sameeyo liiska Paris For Free. Socodka dhererka Canal St Martin! Tani haray mid ka mid ah kooxaha ugu cadcad my socdaa magaalada this. nin sameeyey biyo mareen A, kanaalka ku saabsan yahay 4.5 km dheer, xira Canal de L Ourcq in reebin ah. Asal ahaan ka dhisay 1802 by Napolean sida ku riixdaan ah out of River Ourcq ah, lagu doonayo in la keeno biyo la cabbi karo oo la cabbo in PSG buuxeen cudurada iman kara sida daacuunka iyo dabadhiig qaba.
Qof walba oo shan iyo toban sannadood ama si kanaalka waxaa dredged si ay u nadiifiso laakiin ee muddooyinkii dhowaa goobta laftiisa ku wareegsan marinka leeyahay nooleynta sameeyay. Raadi rugta ah masraxyada iyo qataarro faafinta weheliyaan kanaalka. Goobtani waxa ay sidoo kale waa hang caan baxay dadka ardayga. In dhaqanka oo caan ah, aagga kanaalka la ciyaaray shineemada Amelie sida meel dhagaxyo inay u boodboodaan.
Qiimaha Tareenka Marseilles illaa Lyon
Qiimaha tareenka ee Paris ilaa Lyon
Lyon in Tareenadu Avignon
5. Best Free Waxyaabaha Si Do In Paris For Free: Des Buttes Chaumont Park
Our park ugu horeysay on our 10 Free Waxyaabaha la sameeyo liiska Paris! Tani park magaalooyinka u qurux badan waxa uu ku yaalaa ee waqooyi bari Paris. Features of park this cagaaran ka kooban yihiin baddii macmal ah oo la shinbiraha dabaasha placidly, jasiirad dhagax dhexe baddii yeedhay Ile de la Belvedere, Temple of Sibyl ah (ee xasuusta of Roman macbudka hore ee Vesta in Tivoli) Shaad konton mitir oo kor u gudubno,. buundooyinka Find xira jasiiradda in inta kale ee beerta, wareeg dhexe in ay socdaan, oo buux cagaarka cagaaran.
La Rochelle in Tareenadu Nantes
Toulouse in Tareenadu La Rochelle
Bordeaux inay Tareenadu La Rochelle
Paris si ay Tareenadu La Rochelle
Kale oo super caan rugeedka si ay booqasho in uu yahay, Dabcan, free! A Triumphal halka, waxyoonay by Roman halka Tiitos, Taalladaas xusaysa nolosha waddaniyiinta Faransiis oo dagaal Dagaalkii Kacdoonka Faransiis iyo Wars Napoleonic ah. Dureeri Arc been Qabriga Lama yaqaan Soldier of War Great iyo sida calaamad oo olol weligeed ah oo uu soo gubanaya tan iyo Maalinta heshiis xabbad joojin in 1921. Lix reliefs aad muhiim u qurxin guriyo ku kasta oo muujinayay in daqiiqado muhiimka ah ee Kacaanka iyo Napoleonic War. Waxaa ka mid ah aaska General Marceaus, dagaallada Austerlitz, Arcole, Jemappes, iyo Aboukir, iyo Fall ee Alexandria.
Korodhka helaan madal arkaysid oo ay arkeen Arc kor u dhow ma lacag kharash laakiin aragti ama si dhekhso ah taallo araggiisu ka Elysees Champs ama bas wareegaya ama baabuur gabi ahaanba waa bilaash ah.
Paris si ay Tareenadu Le Mans
Nantes in Tareenadu Paris
Paris si ay Tareenadu Rennes
7. Best Free Waxyaabaha Si Do In Paris: Parc Monceau
Tani waa park dadweynaha in markii hore helay by ee Duke of Chartres. Isagu waa ina adeerkiis ah ee King Louis XVI. park ayaa waxaa loogu talagalay in lagu eg Ingiriisi Garden ah by Louis Carmontelle. Waxaa jira qaababka badan oo naqshadda duwanyihiin in ay nimcadu beerta. Waxaa ka mid ah rotunda yar ee iridda ugu weyn ee park, a Ahraamta Masaarida qadiimiga Ghadafi, giraarka a Roman, a Chinese qalcaddii, soo afjarmay Holland iyo curiosities kale oo dunida ku baahsan. Booqashada park wuxuu u eg yahay booqashada yaabka dhaqan dunida oo dhan ee Ghadafi.
Dijon in Tareenadu Provence
Paris si ay Tareenadu Provence
Lyon in Tareenadu Provence
Marseilles in Tareenadu Provence
8. Free Fashion muuqda Galeries La Fayette
Ma waxaad tahay qof doonaya inuu helo oo ku saabsan waxa cusub oo ka dhacaya caasimada style dunida ah? Markaas ma seegi fursad ay hal qayb oo ka mid ah shows fashion lacag la'aan ah lagu qabtay la Galeries ku Fayette, kasta Friday at 3 pm. Hubi in aad samayso Boos online, ka hor si loo hubiyo helitaanka on taariikhda loo baahan yahay. Sidoo kale, dhaqdhaqaaqa free kale u fiican, haddii aad la Galeries ku Fayette, waa in ay soo booqdaan Terrace Masaarida mid ka mid ah views ugu fiican ee Paris. Ma uusan xirmin suuqa qaar ka adeeganayay dabadeedna ee shopping laftiisa Arcade, haddii aad haysato waqti dheeraad ah.
Lyon in Tareenadu Toulouse
Paris si ay Tareenadu Toulouse
Nice in Tareenadu Toulouse
Bordeaux inay Tareenadu Toulouse
Tani qaado ee waxyaalaha Free inuu ku sameeyo Paris waa muddo dheer aan sannadka oo dhan, laakiin aad ku raaxaysan karaan filimada hawada u furan inta lagu jiro bilaha July iyo August (Thursday si Sunday) in mid ka mid ah magaalada ugu weyn ee beeraha. bandhigtay The kala duwan yihiin shineemo classic in movies ka badan oo casri ah. Ballansan kursi sagxad ah oo loo diyaariyey, waayo, qaar ka mid ah ugu faraxsan yahay filimada sida ugu dhakhsaha badan u helo oo mugdi ah.
10. Watch The Light Free Show At The Eiffel Tower
at madow, saacad kasta ee saacadda muddo shan daqiiqo Tower Eiffel sparkles iyo bixisaa show fudud in oo dhan ay daawanayeen, this sii joogi doonaa kariimka de cream la mid ah waxyaabaha Free inuu ku sameeyo Paris. The Place du Trocadero idin siin doonaa kursiga ugu fiican ee show ee magaalada.
Montpellier in Tareenadu Marseilles
Toulouse in Tareenadu Marseilles
Diyaar u ah inuu badbaadiyo jeebka qaar ka mid ah Euros? Great! tigidhada tareenka ma ka mid yihiin kuwa waxyaalaha Free inuu ku sameeyo Paris, si kastaba ha ahaatee, marka aad isticmaasho Save A tareenka iyagu waa hubaal ma qaali!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Free Waxyaabaha Si Do In Paris” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/free-things-paris/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ZH-CN in fr / ama / luqadaha de iyo ka badan.
europetravel freeparis ParisCity parisfree paristips Tranride tareen safarka